केरा खानेले छोरा जन्माउने सम्भावना धेरै! – Krazy NepaL
November 17, 2021 157
पितृ सत्तात्मक देशमा छोराको महत्व धेरै हुन्छ । जति धेरै शिक्षित परिवार भएपनि छोरा र छोरीबीचको विभेदको कुरा बाहिर आउने गरेको छ धेरैले छोराकै चाहानाका कारण पारिवारिक सम्बन्ध विगारेका पनि छन् ।
छोराको चाहाना राखेकै कारण गर्भपतनको क्रम पनि बढेको छ ।तर, यस्ता केही सोच र भनाईहरु छन् जसको प्रयोगले छोराको रहर पुरा हुन्छ । एक अध्ययनको नतिजा अनुसार तपाईंलाई हामी भन्दैछौं केरा खाए छोरा जन्मने सम्भावना हुन्छ । तपाईं पत्याउनुहुन्छ ?
आज असाेज १५ गते शुक्रवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल